छोराको उपचारमा हिडेकी आमाको बसमै निधन; बच्चा फकाउन मृतक आमाको काखमा राखेको तस्बिरले बनायो भावुक ! - Himali Patrika
छोराको उपचारमा हिडेकी आमाको बसमै निधन; बच्चा फकाउन मृतक आमाको काखमा राखेको तस्बिरले बनायो भावुक !
हिमाली पत्रिका ५ भाद्र २०७८, 9:05 pm
रुकुम पश्चिम- माथिको फोटो झट्ट हेर्दा एक महिला बसको सिटमा आफ्नो बच्चा काखमा लिएर निदाएको जस्तो देखिन्छ तर घटना सोचे भन्दा निकै कारुणिक छ । जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाईरल छ । भनाइ छ नि ‘आमा’ भन्ने शब्द नै काफी छ । यो शब्दको गहिरो अर्थ यो फोटोले बोलेको छ ।
आमाको मृत्युपरान्त पछि पनि आमाकै काख प्यारो हुँदो रहेछ । आमाको ज्युउबाट आत्म उडिसकेको छ । अर्थात आमाले यो संसारमा सधैँका लागी छोडीसकेकी छिन तर त्यो काखको अबोध नाबालकलाई दुनियाँ भन्दा आमाको काख प्यारो लाग्छ । विचरा ! त्यो अन्जान अबोधलाई के थाहा आमाको ममता त्यो काखबाट उडिसकेको छ भनेर ? जतिबेला निन्याउरो अनुहार लाएर आफ्नी मुर्ति जस्ती आमाको काखमा सेपिएका थिए त्यहाँ स्पर्श थिएन, ममता थिएन । सन्तानको माया बोकेर रक्तसञ्चार गर्ने मुटुले सधैँका लागी आफ्नो कामबाट बिश्राम लिइसकेको थियो ।
यस्तो छ घटनाको बिवरण
आठबिसकोट नगरपालिका ९ रुकुम-पश्चिम सुन्दरपानीकी २८ वर्षीया धर्माकुमारी बटाला नेपालगंजमा रहेका श्रीमानसँगको सल्लाहा पछि बिहीबार साँझ साढे ५ बजे ३२ महिनाको छोरा किरण बटलासहित रुकुमको राडी बजारबाट ना ३ ख ३७८८ नम्बरको नाइट बसमा नेपालगंजको लागी हिडिन ।
नेपालगंज भने उनि आफ्नो बिरामी छोराको उपचारका लागी हिडेकी थिइन । नेपालगञ्जमै ठेक्कापट्टाको काम गर्ने श्रीमान दल बहादुर बटालाका घरमा उनकी श्रीमाती र छोरा मात्रै बस्थे । धार्मा बिहिवार सबेरै घरधन्दा सकेर आफुँ उपचार बाट नफर्कुञ्जेलसम्म घरको रेखदेख गर्न भनेर आफन्तलाई घर जिम्मा दिएर हिडेकी थिईन ।
रुकुम जिल्ला अस्पताल सल्लेमा उपचार गर्दा बच्चालाई ठिक नभए पछि थप उपचारको लागी आँफुले नेपालगंज बोलाएको दल बहादुरले सिधाबाटो सँगको कुरामा बताउनु भयो । दल बाहादुरका अनुसार श्रीमती धर्माकुमारी पहिले देखि नै मुटुको बिरामी थिइन ।
उनलाई प्रेसरको समस्या थियो । बटाला र धार्माकुमारीका माईतिले धर्माको उपचारको लागी ४ लाख भन्दा बढी पैसा खर्च गरेर निको पनि बनाएका थिए ।
श्रीमती धर्माकुमारी र नाबालक छोरा बसमा चढेपछि दलबहादुरको निरन्तर कुराकानी भईरहेको थियो । बस जाजरकोटको छेडा भन्ने ठाउँमा आएपछि यात्रुले खाना खाए । ‘जतिबेला मैले श्रीमतिसँग आधा घन्टा जति फोनमा कुरा गरेँ,’ दलबहादुरले भने, ‘उनले आफुँलाई त्यस्तो केहि समस्या नभएको र आरामले यात्रा गरिरहेको छु चिन्ता नगर्नुस भनिन्।’
त्यसपछि बस सुर्खेतको धारापानी भन्ने ठाउँमा पुगेपछि दलबहादुरले फेरि श्रीमतिलाई फोन गरे । त्यतिबेला पनि धर्माकुमारीले श्रीमानलाई आफ्नो अवस्था सामान्य रहेको र आरामले यात्रा गरिरहेको तथा बसमा अरु पनि छन चिन्ता नगर्नुस भनिन । त्यसपछि फोन सम्पर्क हुन सकेन । रात ढल्कीसकेकोले दलबहादुर श्रीमतिलाई बिहान नेपालगञ्जमै भेट्ने कल्पना गर्दै सुते ।
राडीदेखि कोहोलपुरसम्म झन्डै पौने तीन सय किलोमिटरको बाटो काट्न बसलाई १०-१२ घण्टा जस्तो लाग्छ । सडकको सबै भाग पहाडी भूभागमा पर्ने हुँदा यात्रा निकै कठिन थियो । धर्माकुमारी बसेकै छेउको सिटमा अर्जुन केसी यात्रारत थिए । धर्माकुमारी छोरासँगै बसेकी थिइन् ।
वान्ता हुन थालेपछि धर्माले अर्जुनसँग पोलेथिनको झोला मागिन् । त्यसपछि उनले आफूलाई अगाडिको सिटमा बस्ने व्यवस्था मिलाई दिन अर्जुनलाई आग्रह गरिन । केसीले आफू बसेको झ्याल नजिकको २ नम्बर सिट धर्माकुमारीका लागि छोडिदिए । त्यसपछि सिटमा आमा छोरा एक्लै बसे । केसी १ नम्बर सिटमा एक्लै बसे ।
सुर्खेतको बोटेचौर भन्ने ठाउँमा आइपुगेपछि धर्माकुमारीले दुई/तीन पटक वान्ता गरिन । तर, उनी त्यसपछि सामान्य अवस्थामा सिटमा बसिन् ।
मध्यरात भइसकेको थियो । बस अगाडि बढिरहेको थियो ।
सबै यात्रु बिस्तारै निदाई सकेका थिए । करिब २/३ बजेतिर बर्दिया र सुर्खेतको सिमाना नजिकै पर्ने हरिया लेक आइपुग्दा एकाएक उनको बच्चा रोएको आवाज नजिकैको सिटमा बसेका केसीले सुने । ‘उता फर्केर हेर्दा बच्चा सिटदेखि तल खसेको थियो,’ केसीले भने, ‘त्यसपछि हामीले धर्माकुमारीलाई उठाउन खोज्यौं, तर उहाँ हलचल गर्नुभएन ।’
त्यतिबेलासम्म धर्माकुमारी बसको सिटमै कहिलै नब्युझिने गरि चीर निन्द्रामा सुतिसकेकी थिइन् । त्यो अवस्थाले बसमा यात्रारत सबैलाई साह्रै दुःखी र निराश बनायो । नजिकै रहेको बबई बजारको कुनै मेडिकलमा तत्काल उपचार गर्न लिने सल्लाह गर्यौँ र अघि बढ्यौँ केसीले थपे । तर, त्यहाँ मेडिकल बन्द भइसक्ने हुँदा बरू छिटो कोहलपुर पुर्‍याउने सल्लाह भयो ।
उनकै गाउँकी अर्की एक महिला पनि उक्त बसमा सवार थिइन् । जसले धर्माकुमारीको मृत शरीर सँगैको सिटमा बसेर बसेकै अवस्थामा समातेर यात्रा गरिन् । बच्चा बेस्सरी रोइरहेको थियो । यात्रुले हरेक कोसिस गर्दा पनि बच्चा रुन नछोडेपछि अबोध बच्चालाई उनै मृत धर्माकुमारीको काखमा राखियो र छोरा केहि शान्त पनि भयो ।
त्यसैबेला कसैले उक्त सिन मोवाईलमा कैद गर्यो जुन निकै भावुक छ । एउटा आमा र बच्चाको माया कति हुन्छ भन्ने गहिरो भाव तस्बिरमा प्रष्ट झल्किन्छ ।
श्रीमतीलाई नेपालगञ्जमा स्वागत गर्ने प्रतिक्षामा बसेका दलबहादुर भने एकाबिहानै श्रीमतीलाई सदाको लागि गुमाउनु परेको खबर सुन्दा छाँगाबाट खसेझैं भए ।
तै पनि देवको लिला नमानी सुख थिएन । उनी पौने ६ बजेतिर गाडी लगेर बस आउने ठाउँ कोहलपुरको दश बिगाहा पुगे । त्यहाँ छोरा बुवा देखेपछि भने अलि शान्त बन्यो । रोईरहेको छोरालाई चुम्बन गर्दै आफन्तको जिम्मा लगाएर उनले श्रीमति धर्माकुमारीको मृत शरीर तत्कालै नर्सिङ स्टाफ बोलाएर चेकजाँच गर्न लगाए । ‘तर उनि अब जीवित नरहेको भन्ने वाक्य सुन्ना साथ बेसरी भक्कानिदै तत्काल त्यहिँ गाडी दौडाउन लगाएर नेपालगञ्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालमा पुर्‍याए ।
अहिले धर्माकुमारीको मृत शरीर आइसियूमा राखिएको छ । मृत्यु भइसकेको भए पनि उनले माइतिको बाटो कुरेका छन, ‘जेठान आर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालगञ्ज आइसक्नु भएको छ र आज बाँकी अन्तिम संस्कारको कामहरु गर्नेछौं ।’ दल बहादुरले अगाडी थपे ।
‘म कस्तो अभागि रहेछु, पहिलो श्रीमतिले छोडेर अर्कैसँग पोईला गइ र अहिलको श्रीमतिले कलिलै उमेरमा सदाका लागि संसार छाडिन,’ दलबहादुरले भने, ‘पहिलोबाट ७ वर्षका छोरा विवेक आफैँसँग छन र अब अहिलेको बाट अवोध ३२ महिनाका किरण छन । अब मैले के गरि सम्झाउने होला ?’
यात्राकै क्रममा धर्माकुमारीको मृत्यु पछि किरण धेरै रोएको हुँदा उनलाई फुल्याउन अरु यात्रुले आमाको काखमा राखेको फोटा सामाजिक सञ्जालमा अहिले धेरै भाइरल भएको छ ।
यो तस्बिर बसमा यात्रारत कुनै यात्रुले खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि त्यसलाई सयौं फेसबुक प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन ।